शुक्रबार भित्रै सरकार बिस्तार गर्दै देउवा, क-कसलाई बनाउँदैछन् मन्त्री ? « Supremekhabar
शुक्रबार भित्रै सरकार बिस्तार गर्दै देउवा, क-कसलाई बनाउँदैछन् मन्त्री ?
प्रकाशित मिति : २०७८, श्रावण, १३, बुधबार १७:००
काठमाडौं- पाँच दलीय गठबन्धनले शुक्रबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले भोलीसम्ममा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसक्ने सहमति गरेको हो ।
बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डाको जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई दिएको छ । सहमतिअनुसार सम्बन्धित पार्टीका प्रमुख नेताहरुले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउनेछन् । मन्त्रीको नाम पाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
माधव पक्षका सांसदले समेत सरकारमा जानुपर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाल खेमा बाट रामकुमारी झाँक्री,बिरोध खतिवडा,मेट मणी चौधरी मन्त्री बन्ने भएका छन्।